September 21, 2013 – democracy for burma
Big foreigner bosses of all the INGOs based in Burma should take their wages the same as their Burmese colleagues. INGO များတွင် လုပ်ကိုင်နေသော နိုင်ငံခြားသား အရာရှိများသည် မြန်မာအရာရှိများ ရရှိသော နှုန်းထားအတုိုင်းသာ လစာယူသင့်ကြသည်။
On September 21, 2013 September 21, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
First change : Big foreigner bosses of all the INGOs based in Burma should take their wages the same as their Burmese colleagues.
INGO များတွင် လုပ်ကိုင်နေသော နိုင်ငံခြားသား အရာရှိများသည် မြန်မာအရာရှိများ ရရှိသော နှုန်းထားအတုိုင်းသာ လစာယူသင့်ကြသည်။
MYANMAR BURMA: The Central Bank said the institution has ‘no official record’ or knowledge of the US$11b in five foreign banks accounts
On September 21, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
The Central Bank said the institution has ‘no official record’ or knowledge of the US$11b in five foreign banks accounts as reported by the media and declined to say if the allegation would be investigate.
“We have no official records about the 11 billion dollars. We don’t know who has the accounts and how much they are. Our official record is that we have US$7.6 billion and say it with transparency. The Central Bank, the state bank or private banks have nothing to do with that 11 billion. We have now submitted official results,” said Kyaw Kyaw Maung, the governor of the Central Bank, duringabriefing in Nay Pyi Taw on Friday.
Local Myanmar media reported that US$11 billion of the country’s money are being kept in five foreign banks. The information was reportedly revealed by the Asia Program manager of Bank of Information Center (BIC), Mr. Jelson Garcia, on September 10.
Asked if the government had any plan to look into the issue of Myanmar nationals holding accounts in foreign banks: Deputy Information Minister Ye Htut said:
“As I have said on my Facebook page, 195 countries across the world have banks. With tens of thousands of banks, we need to have strong evidence. In Greece, there wasaproblem of having deposited money in foreign bank accounts. As the media talked about accounts in foreign banks, the Greece government had to request the respective banks. There are procedures to do so. But now, we cannot know which country or which country has such amount (US$11 billion). There is no reason that we cannot clarify if we have correct information and sources.”
When asked to respond to suggestions that the government has been dismissive of the reports about the US$11 billion in foreign banks, Ye Htut said: “Even the United States cannot address such issue immediately. With the resources we have, we cannot talk about this clearly. That’s why we are asking for more correct information. I have sent an email to Garcia. Give me evidence if you have any,” he added.
On September 13, The Irrawaddy website posted the news titled “Behind the US$11 billion”. According to the news, in 2009, the US-based non-profit organization Earth Rights International (ERI) reported that Myanmar had unknown foreign banks accounts worth of billions of US dollars. The then ruling junta had deposited US$4.8 billion in two Singapore-based banks—the Overseas Chinese Banking Corporation (OCBC) and DBS Group. The amount was natural gas sales, ERI reported.
When contacted, Paul Donowitz, ERI campaigns director, told the Irrawaddy that years ago, ERI acquired sources that Myanmar had stashed vast amounts of foreign reserves generated from Yetagon Gas Project in overseas banks, including Singapore’s OCBC and DBS.
In 2009 also, an article quoted the ERI’s report as saying the then ruling junta had stashed billions of US dollars in OCBC and DBS. The money was generated from the Yadana Gas Project operated by oil giants Total and Chevron and Thailand’s PTTEP. More than 60% of gas was imported to Thailand.
The Irrawaddy’s news report also quotedaforeign banking consultant in Thailand, who declined to be named, as saying that the government and some military leaders did not add gas sales to the public accounts according to the market price (1000 kyats for $1). Instead, they paid Ks6for $1 officially set by the government. The difference was therefore siphoned off and sent to banks in Singapore and Dubai.
The question by The Daily Eleven as to whether there wasaplan to investigate the accounts in Singapore was unanswered.
When asked which bank accounts received the money generated from gas sales to Thailand, Deputy Energy Minister Myint Zaw said it only went to the local banks accounts.
“Our ministry does not open any foreign bank account,” said the deputy minister.
Then, The Daily Eleven questioned which foreign banks Myanmar had put its foreign reserves—Swiss, Singaporean or Chinese banks.
The Central Bank governor, Kyaw Kyaw Maung replied: “We have placed the foreign reserves in various countries. It is not appropriate to say which countries. Foreign merchants deal with banks in many nations across the world for exports and imports. We have no limitation such as Singapore or China. Export and import companies, government enterprises and all banks here have money in foreign banks. The Central Bank, Myanmar Foreign Trade Bank, Myanmar Economic Bank, Myanmar Foreign Investment Bank and private banks have accounts in foreign countries for their smooth business transactions. I will not go into detail.”
ALP နှင့် AA တို့ စစ်မှန်သော ပေါင်းစည်းမှု ရရှိလာစေရန် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
လွန်ခဲ့သော စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မဲဆောက်မြို့၊ ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP) ရုံးတွင် ALP နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်မတော် (AA) တို့အကြား စစ်မှန်သော ပေါင်းစည်းမှု ရရှိနိုင်ရန် ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ထိုဆွေးနွေးပွဲတွင် အချင်းချင်းကြား အပြန်အလှန် နားလည်မှု တည်ဆောက်ရေး၊ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရေး နှင့် ပေါင်းစည်းရေးတို့ကို အလေးပေး ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး စစ်မှန်သော ပေါင်းစည်းမှုကို ရရှိလာစေရန် အဆင့်ဆင့် ဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ထို့ပြင် တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံပြီး လုပ်ဆောင်နေသော အဖွဲ့အစည်းများအကြား ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးရန်လိုအပ်ပြီး အမျိုးသားရေး ဘုံရည်ရွယ်ချက်များကို လက်တွေ့ကျကျ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ယုံကြည်မှုများကို ခိုင်ခိုင်မာမာ တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရက္ခိုင့် တပ်မတော် (AA)မှ ထိုင်းဖက်ဆိုင်ရာ စစ်ဒေသ တာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူး ကျော်ဟန်က ယခုလို ပြောသည်။
” အဖွဲ့အစည်း တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ကြားမှာ ချစ်ခင်နားလည်မှုတွေ တစုံတရာ ရှိနေပေမယ့်လည်း အချင်းချင်း နားလည်မှု၊ ယုံကြည်မှုတို့ကို တရားဝင် တည်ဆောက်သွားမယ့် ကိစ္စရပ်တွေကို အမျိုးသားရေး မူဘောင် အတွင်းမှာ ရပ်တည်ချက် ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်တယ်။ အဲဒီ အမြင်ပေါ်မှာပဲ နားလည်မှု တည်ဆောက်ရေး၊ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရေးနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတွေကို တစ်ဆင့်ချင်းစီ အကောင်အထည် ဖော်သွားမှာဖြစ်တယ်။ ” ဟု ပြောသည်။
ထိုသို့ စစ်မှန်သောပေါင်းစည်းမှု ရရှိရန်အတွက် အချင်းချင်းကြား အပြန်အလှန် နားလည်မှု တည်ဆောက်ရေး၊ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတို့ကို အဆင့်အဆင့် ဆွေးနွေးသွားနိုင်ရန်ှ၊ ညီညွတ်ရေးနှင့် လိုအပ်ချက်များကို ညှိနှိုင်းတိုင်ပင် ဆွေးနွေးသွားရန် ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် AA ဖက်မှ ဗိုလ်မှူး ကျော်ဟန်နှင့် ALP ဖက်မှ ယာယီကိုယ်စားလှယ် အတွင်းရေးမှူး ခိုင်သုခတို့မှ တာဝန်ယူထားကြောင်း သိရသည်။
ဆွေးနွေးပွဲသို့ ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP)မှ ဥက္ကဌ ဦးခိုင်ရဲခိုင်၊ ဒု-ဥက္ကဌ ဦးခိုင်စိုးနိုင်အောင်၊ တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး ခိုင်ထွန်းလင်း၊ ရမ္မာဝတီ တပ်ရင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ခိုင်ဖြိုးမင်းနှင့် ရမ္မာဝတီ တပ်ခွဲမှူး ခိုင်နေမျိုးတို့ တက်ရောက်ပြီး ရက္ခိုင့်တပ်မတော် (AA) ဖက်မှ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီး ထွန်းမြတ်နိုင်၊ ဗိုလ်မှူး ကျော်ဟန်နှင့် ဗိုလ်ကြီး ရဲခိုင်တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခုအကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲသည် ပထမဆုံးဖြစ်ပြီး နေ့လယ် ၂ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီထိ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအနေနဲ့ လက်ရှိရခိုင်ပြည်၏ လုံခြုံရေးအခြေအနေအား သတိထား ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု ယူဆကြောင်း၊ ALP အနေနဲ့လည်း မြန်မာအစိုးရမှ ရခိုင်ပြည်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခတွင် ၄င်းတို့မှ အားပေး အားမြှောက်လုပ်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရပြီး မယုံကြည်မှုများ ရှိနေသောကြောင့် လုပ်ကိုင်ရာတွင် အခက်အခဲ ရှိနေကြောင်းကို ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ဒု-ဥက္ကဌ ခိုင်စိုးနိုင်အောင်မှ ယခုလိုပြောသည်။ Continue reading “ALP နှင့် AA တို့ စစ်မှန်သော ပေါင်းစည်းမှု ရရှိလာစေရန် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး” →
Myanmar Burma Peace Day Demonstration-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ မြင်ကွင်းများ
MANY PEACE EVENTS BUT NO PEACE
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၁။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လူအင်အား ၁၅၀ ခန့်သည် ယနေ့နံနက် (၁၁း၀၀)နာရီတွင် မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှစတင်၍ အလုံ၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်များကို ဖြတ်ကာ ပြည်သူရင်ပြင်သို့ လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြပြီး အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများက ပြည်သူ့ရင်ပြင်တွင် ပြခန်းများ ဖွင့်လှစ်ပြသခြင်း၊ တေးဂီတအဖွဲ့များက ငြိမ်းချမ်းရေးသီချင်းများ သီဆိုခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ဓါတ်ပုံ – သီဟသစ်
Functions of pressure groups-နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာခေါင်းဆောင်တွေကို Power Balance လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ Pressure Groups
နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာခေါင်းဆောင်တွေကို Power Balance လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ Pressure Groups တွေလိုအပ်ပါတယ် ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဏာရှင်လက်သစ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်လို့ပါ။ သူတို့ကနိုင်ငံရဲ့ Political System ကို check and balance လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကမထိရဲ၊မကိုင်ရဲတဲ့ပြည်သူ့ဆန္ဒတွေကိုထင်ဟပ်ပြပြီးအစိုးရနဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေကိုဖိအားပေးကျတာဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံးကအဲဒီPressure Groups တွေဟာအမှီအခိုကင်းကင်းနဲ့လုပ်ရင်တော့ပြည်သူ့ဆန္ဒကိုတကယ်ထင်ဟပ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီ့ပြင်တိုင်းပြည်အတွက်တကယ်အကျိုးရှိစေမဲ့ကိစ္စတွေကိုဖော်ထုတ်တင်ပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Pressure Groups တွေအကြောင်းကိုအကျဉ်းချုံးလေ့လာဖို့ရှယ်လိုက်ပါတယ်။
Performaarole in educating citizens about specific issues
Groups can enhance democratic participation, pluralism and diversity
Groups raise and articulate issues that political parties perhaps won’t touch because of their sensitivity
They provide an important access point for those seeking redress of grievance
They represent minorities who cannot represent themselves
Groups can be an important and valuable source of specialist information / expertise for an overloaded legislature and civil service
Many groups play an important role in implementing changes to public policy
Pressure groups encourageadecentralisation of power within the political system. They act asacheck and balance to the power of executive government
CORAL ARAKAN NEWS 21.SEPTEMBER ရခိုင့်လူထုကိုယ်စား စကားပြောခွင့် မည်သူတွေမှာ ရှိသလဲ By Kyaw Zaw Oo
စစ်တွေ ၊ ၂၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃ ၊ Coral Arakan News ၊ [ op-ed ]
# လာမည့် စက်လင်ဘာ (၂၉) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန် IBC ခန်းမ ၌ ရခိုင်လူထု ကိုယ်စားပြု ခေါင်းဆောင်များ နှင့် လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်း က တွေ့ဆုံကာ ရခိုင်ပြည်နယ် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ နှင့် လူငယ်ကဏ္ဍများကို ဆွေးနွေးသွားမည် ဆိုရာ ကြိုဆိုလိုက်ရပါသည်။
# သို့သော် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် ရခိုင်လူထု ကိုယ်စားပြုမည့် ကိုယ်စားလှယ်များကို မည်ကဲ့သို့ ရွေးချယ် စေလွှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသနည်း ဆိုသော မေးခွန်း တစ်ခု ရှိလာပါသည်။
# (၁၇) မြို့နယ်မှ ကိုယ်စားလှယ်များ ရရန်အတွက် ရန်ကုန်အခြေစိုက် ရခိုင်သဟာယအသင်း က ရန်ကုန်ရှိ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်သာရေးနာရေးအသင်းများက တစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ပြီး မြို့နယ်အသီးသီးက ရွေးချယ်ခိုင်း လိုက်ပါသည် ဟု ဆိုပါသည်။ စစ်တွေမှအပသော အခြားရခိုင်မြို့များတွင် သက်ဆိုင်ရာမြို့များ၏ အစီအစဉ်အတိုင်း ရွေးချယ်ကြပါလိမ့်မည်။ ယခု မိမိ ပြောလိုသည့် အကြောင်းအရာက စစ်တွေကိစ္စ ဖြစ်လေသည်။
# စစ်တွေလူထုကိုယ်စားလှယ် သုံးဦးကို မည်ကဲ့သို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါသနည်း ဟု ဆရာဦးသန်းထွန်းကို ဖုန်းဆက် မေးမြန်းသောအခါ ၄င်း နှင့် ဦးသာပွင့်ကို ဦးရွှေမန်းက by name နှင့် ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် မဖြစ်မနေ ကိုယ်စားပြုသွားရတော့မည် ဖြစ်ကာ၊ ၄င်းတို့နှစ်ဦးကပင် စစ်တွေအခြေစိုက် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးရွှေထွန်းအောင်အား တတိယမြောက် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ထားသည် ဟု ဆိုပါသည်။ သို့ဖြစ်လျှင် ဆရာတို့မှာ စစ်တွေလူထု ကိုယ်စားလှယ်များဟု မှတ်ယူနိုင်ပါမည်လား ဟု မိမိက မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ရပါသည်။
# ရပ်ရွာအကျိုးကို ရပ်ရွာကိုယ်စားပြုပြီး ရင်ဆိုင်ပြောဆိုနေသူများကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ရပ်ရွာအကျိုးကို ရပ်ရွာကိုယ်စားပြုပြီး ရင်ဆိုင်ပြောဆိုနေသူများသည် လူထုခေါင်းဆောင် နိုင်ငံရေးသမားများ ဟု သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သော လူထုခေါင်းဆောင် နိုင်ငံရေးသမားများသည် တရားဝင်ဖြစ်မှု သဘောတရား (legitimacy) ၊ ကိုယ်စားပြုမှုသဘောတရား (Representation) ၊ လွှဲအပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးသော အခွင့်အာဏာ (mandate) စသည်တို့ကို ကောင်းစွာ နားလည် သဘောပေါက်လျှင် အလုပ်လုပ်ရာ၌ ပိုမိုခွန်အားရှိပါသည်။
# ကိုယ်စားပြုနိုင်သော မိမိ၏ပုဂ္ဂလိက စွမ်းပကား ရှိနေပါသော်ငြားလည်း လူထု၏ကိုယ်စားပြုမှုမရှိလျှင် လုပ်ရပ်ဆောင်ရွက်ချက်၏ သက်ရောက်မှုအားနည်းသွားနိုင်ပါသည်။ အမှန်တကယ် ကိုယ်စားပြုသူများဖြစ်ပါက လုပ်ရပ်များသည် ပိုမိုအားရှိနိုင်ပါသည်။
# ဆရာဦးသန်းထွန်းမှာ မိမိအား ငယ်စဉ်က စာသင်ခဲ့သော ဆရာဖြစ်သည့်အပြင်၊ မိမိတို့ရင်ဆိုင်နေရသော ငြိမ်း/စီ ပုဒ်မ-၁၈ အမှုအတွက် မိမိနှင့်တွဲဖက်တရားခံဖြစ်သူ ဒေါ်ညိုအေးက ထည့်သွင်းထားသည့် တရားခံပြ သက်သေတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ လာမည့် စက်တင်ဘာ (၂၄) ရက်နေ့ ရုံးချိန်းတွင် ဆရာဦးသန်းထွန်းက ထွက်ဆိုချက်ပေးရ ဦးမည် ဖြစ်ပါသည်။
# ဥပဒေပညာရှင် ဦးသာပွင့် ဆိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်း ရှေ့နေမငှားဘဲ ရင်ဆိုင်နေသော မိမိတို့အမှုအတွက် အစဉ်အမြဲ စေတနာဖြင့် အကြံပေးနေသူ ဖြစ်ပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သဘောဖြင့် မိမိက နစ်နာအောင် ပြောရမည့် သူ မဟုတ်ပါ။
# သို့ရာတွင် မပြောမဖြစ်သည့် အခြအနေကိုရောက်နေပြီ ဟု ထင်မြင်သောကြောင့် ၀င်ပြောရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပြောရသည်ကိုလည်း အားနာပါသည်။ ထို့အပြင် နောက်ထပ်ပြောရန် ကျန်ပါသေးသည်။ စစ်တွေ မြို့မိမြို့ဖများအဖွဲ့ဆိုသည့် ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။
# ဟိုးယခင်က ဈေးမိဈေးဖ အမည်ခံအဖွဲ့များသည် ဈေးအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့များ ဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ ဟိုစဉ်ယခင် စစ်တိုင်းမှူးများ ဓါးမိုးအုပ်ချုပ်စဉ်ကာလ စစ်ထောက်လှမ်းရေးများ ဓါးထက်စဉ်ကာလက၊ တိုင်းမှူးတွေက ပိုက်ဆံအလှူထည့်ပါဟု ပြောတိုင်း လက်မတွန့်ဘဲ အလှူထည့်နိုင်သူများကို မြို့မိမြို့ဖများ ဟု အာဏာပိုင်များက အမည်ကင်ပွန်းတပ်ပေးခဲ့သည်။ ယခုတိုင် ထိုအမည်က မပြောင်းသေး။
# ခရိုနီမြို့မိမြို့ဖများနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်တွေမြို့တွင် ဖြန့်စာ တစ်စောင် အတော်အသင့် ပျံ့နှံ့ ဖတ်ရှုရဖူးသည် ဟု ဆိုသည်။ မိမိကား မဖတ်ဖူး။ တစ်ဆင့်စကား ပြောကြားချက်များအရ သိရသည်က ထိုစာတွင် ရေးသားထားသည်မှာ စစ်တွေမြို့မိမြို့ဖအဖွဲ့တွင် ပါဝင်နေသူအချို့၏ နောက်ကြောင်းများကို ရေးသားထားသည် ဟု ဆိုသည်။ အချို့က မှောင်ခိုရာဇာ၊ အချို့က အာဏာပိုင်များနှင့် လက်ဝါးချင်းရိုက်ကာ လူထုကို ဂုတ်သွေးစုတ်သူ၊ မိသားစုရာပေါင်းများစွာ၏ ဘ၀ကို ပျက်စေခဲ့သူ၊ စသည်ဖြင့် စသည်ဖြင့် . . . . ။ မိမိကား ထိုစာကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ဖတ်လိုက်ရခြင်း မရှိခဲ့။
# အဆိုပါ မြို့မိမြို့ဖအဖွဲ့သည် ပြောင်းလဲလာသော ခေတ်စနစ်နှင့် အညီ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အရေးပေါ်အခြေအနေများကို တုံ့ပြန်ပြောဆိုလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဦးသာပွင့် နှင့် ဦးသန်းထွန်း တို့ကဲ့သို့ ခေတ်ပညာတတ် လူလတ်တန်းစားအလွှာများ ပါဝင်လာလေသည်။ ၄င်းတို့သည် စွမ်းရည်စွမ်းပကားရှိသူများဖြစ်သည့်အလျောက် မြို့မိမြို့ဖအဖွဲ့ကို ကိုယ်စားပြုပြောဆိုနိုင်သော ပါးစပ်ပေါက်များဖြစ်လာသည်။ ၀မ်းသာစရာကောင်းသည်ကား အမှန်ပင်။ သို့ရာတွင် ၄င်းတို့မှာ လူထုကို ကိုယ်စားပြုသည့်တရားဝင် ကိုယ်စားပြုမှု မရှိသေး။ လူထု၏ အမိအဖ လည်း သေချာပေါက် ဟုတ်ကို မဟုတ်နိုင်။
# မိမိတို့လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အောက်ခြေအဆင့်များ၌ ဒီမိုကရက်တိုင်ဇေးရှင်းကို တဖြည်းဖြည်းပုံသွင်း လုပ်ဆောင်ယူရာတွင် မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်နှစ်ချက်ရှိလေသည်။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ခန့်ထားခြင်းပြုရမည့်အစား လူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်သော မြို့ဝန်များ (elected mayors) ဖြင့် အစားထိုးရန်။ နောက်တစ်ချက်က လက်သင့်ရာစားတော်ခေါ်ကာ by name ဖြင့် ခန့်ထားသည့် မြို့မိမြို့ဖ အဖွဲ့ဆိုသည်၏ အစား၊ မြို့ဆိုင်ရာကောင်စီများ (city councils) များဖွဲ့စည်းကာ စည်ပင်သာယာရေး နှင့် အခြားသော ဒေသန္တရ ကိစ္စ အ၀၀တို့ကိုဆောင်ရွက်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။ မြို့ဝန်ကိစ္စက ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်၍ အလှမ်းဝေးနိုင်သော်လည်း၊ လူထုရွေးချယ်သော မြို့ကောင်စီကိုမူ နည်လမ်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ရှာကြံတင်မြှောက်ဖွဲ့စည်းထားနိုင်ခြေရှိသည် ဟု ထင်မြင်မိသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဖွဲ့စည်းထားပါက လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ မရှိသေးသော်လည်း ပြောရေးဆိုခွင့် တစ်ခုခုတော့ ရှိလာမှာကတော့ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
# နောက်တစ်ချက်က လက်ရှိ အသွင်ပြောင်း အရပ်သားအစိုးရသည် လက်ပံတောင်းဖြိုခွင်းမှုအတွင်း ရဟန်းများကို မီးလောင်ဒဏ်ရာများစွာရအောင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက် မသက်ဆိုင်သူ သံဃာများကို ပင့်ဖိတ်တောင်းပန်တတ်သော အစိုးရဖြစ်သည်။ တိုက်ခိုက်ခံရသူ ရဟန်းများကို တောင်းပန်ခဲ့သည် ဟုကား မိမိ သိသလောက် မကြားမိသေးချေ။ ပရိယာယ်များလှပါပေသည်။
# သူရဦးရွှေမန်း နှင့် တွေ့ဆုံသောအခါ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကဏ္ဍနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ကဏ္ဍ တို့ကိုလည်း ဆွေးနွေးမည် ဟု ကြားသိရပါသည်။ ဤနေရာတွင် အခြေအနေများ၏ အကြောင်းအကျိုး ဆက်စပ်မှုကို သဘောပေါက်နိုင်က ပိုကောင်းပါသည်။ ရခိုင့်သယံဇာတ အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိရေးကော်မီတီ က signature campaign လုပ်ကာ လှုပ်ရှားနေမှုများကြောင့် အချို့သော အခင်းအကျင်းများ လှုပ်ရှားလာသည် ဟု သဘောပေါက်ရန်လိုသည်။
# အထက်ပါတို့မှာ သတိမူရန်အချက်များဖြစ်ပါသည်။ နောက်ထပ် သတိမူစရာများ ရှိပါသေးသည်။ ရခိုင်လူမှုကွန်ရက် (စစ်တွေ) က တစ်မြို့လုံးနှင့် ဆိုင်သော ကိစ္စအချို့ကို ၀ိုင်းဝန်းဆုံးဖြတ် ဦးဆောင်မှုပေးခဲ့သည်ကို မမေ့သင့်ပါ။ ယခုမူ ကျောက်တော်မှ ကွန်ရက်ခေါင်းဆောင်များ စစ်တွေ ထောင်ထဲကို ရောက်နေကြပါပြီ။ ရခိုင်လူမှုကွန်ရက် (တောင်ကုတ်)၏ ခေါင်းဆောင် သုံးဦးလည်း သံတွဲထောင်ထဲ ရောက်နေပြီ။ စစ်တွေမှ မိမိ နှင့် ဒေါ်ညိုအေးတို့က ထောင်ဝင်ရန် အလှည့်စောင့်နေကြသည်။ ရသေ့တောင်မှ ရဲဘော်ရဲဘက် နှစ်ဦးလည်း ထိုနည်း နှင်နှင်ပင်။
# ဒီမိုကရက်တိုင်ဇေးရှင်းကို လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း သက်ဝင်အောင်လုပ်ဆောင်ရာတွင် ခြေလှမ်းများ အဆင့်များမှာ သေးငယ်သည်ဟူ၍မရှိ၊ လုပ်နိုင်သမျှလုပ်ဆောင်ကြဖို့ နှိုးဆော်ကြသည့်သဘော ဖြစ်ပါသည်။ လက်သင့်ရာ စားတော်ခေါ်နေကြောင်းစွပ်စွဲသည် ဟု မမြင်စေလိုပါ။
# ပြီးခဲ့သည့် နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ဗဟိုအစိုးရ နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရတို့သည် အဆိုပါ “မြို့မိမြို့ဖ” အမည်ခံ အုပ်စုငယ်တစ်စုအား လာတိုင်း ရောက်တိုင်း ဆုံတိုင်း ကြုံတိုင် ခေါ်ယူတွေ့ဆုံကာ၊ လူထုကိုယ်စားလှယ်များ နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည် ဟု အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ဖူးလေပြီ။ ဘာတွေ ဆွေးနွေးလို့ ဘာတွေ သဘောတူလိုက်ကြမှန်း မသိကြရ။ ထိုသူများမှာ မိမိတို့ ကိုယ်စားလှယ်များ မဟုတ်ကြောင်း မပြောလိုက်ကြရ။ ရခိုင်လူထုကို ကိုယ်စားပြုသော ရခိုင်ပါတီနှစ်ပါတီကို အာဏာပိုင်များက အဖက်အလုပ်။ အဖက်လုပ်လျှင်လည်း အစည်းအဝေးများတွင် မြို့မိမြို့ဖ ဆိုတဲ့သူတွေ ရှေ့က လေးယောက်တက်၊ ပါတီတွေက တစ်ပါတီတစ်ယောက်တက် ဆိုတာမျိုး မဖွယ်မရာပြုမူလေသည်။ RNDP က ငါတို့လာတဲ့သုံးယောက်စလုံး ရှေ့တန်းတက်ထိုင်ပြီးပြောမယ်၊ မပြောရရင်ပြန်မယ် ဟု ပြောပြီး အမှန်တကယ် ထပြန်တော့မှ ကိစ္စပြတ်လေသည်။
# ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောဆိုလုပ်ကိုင်တတ်သော နိုင်ငံရေးပါတီတို့ကို ကြောက်ရကား ပြည်နယ်အစိုးရ ဗဟိုအစိုးရ အရာရှိကြီးများသည် “မြို့မိမြို့ဖ” ဆိုသော အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို စစ်တွေမြို့တွင် တီတွင်ဖန်တီး ထားလေသည်။ ၄င်းတို့အားလိုသည့်အချိန်တွင် ခေါ်ယူတွေ့ဆုံကာ ငါတို့ လူထု ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ပြီးပြီ ဟု ပြောတတ်ကြလေသည်။ အဆိုပါ လူထုကိုယ်စားလှယ် ဆိုသူကြီးများကလည်း သဘောခွေ့ မနောတွေ့နေရကား ပျော်မဆုံးမော်မဆုံးပေ။ မိုးမမြင် လေမမြင်ပေ။ အောက်ခြေကိုယ်စားပြုမှုရှိမရှိကိုလည်း သတိမရပေ။ ဆွေမျိုးမေ့သည် ဆိုသည့် စကားမှာ ဤသည်ကိုပင် ဆိုလိုပုံ ရချေသည်။
# နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ သူရဦးရွှေမန်းကို တစ်ခုမေးလိုက်ချင်ပါသေးသည်။ ယခုလို လူထုကိုယ်စားလှယ်တွေ ဆိုပြီး စကားပြောဖို့ လိုက်ရှာနေသည်မှာ ယခုတင်မြှောက်ထားသော အရပ်ရပ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များကို လူထု ကိုယ်စားလှယ် ဟု မမှတ်ယူခြင်းလော ဆိုသည့်မေးခွန်းပင် ဖြစ်လေသည်။
( ကျော်ဇောဦး )